Vane Pump, umfutholuketshezi Servo System, umfutholuketshezi Amafutha Pump, Electric umfutholuketshezi Pump - Vicks
ABT Series Servo Pump Single umfutholuketshezi Pump
Taft ukuqeqeshwa ilayisensi Forklift nokuhlolwa ilayisensi e Melbourne futhi Queensland, sinikeza LO ekilasini amalayisense Forklift, LF ekilasini amalayisense Forklift, ukuqeqeshwa Forklift sokuvuselela, emsebenzini nokuphepha izifundo, ukukhiqiza amakilasi futhi uqeqesho lokungeniswa. Nge ukuqeqeshwa phakathi nesonto noma ngoMgqibelo amaseshini etholakalayo eziningi izifundo zethu, siyazimisela ukuthi ukwazi ukubona ukuqeqeshwa emhlabeni isimiso sakho.
Yonke imikhiqizo kusekelwe kwamazinga amazwe ngamazwe, Kulula Yokunikezelana amaphampu ubudala, Imikhiqizo yethu izinga okusezingeni zidlulile 4 esiqinile ngamazwe ngezigaba umphakathi isitifiketi ngesikhathi esifanayo.
Ngempumelelo ubuchwepheshe ukwesekwa nge iqembu lochwepheshe Abanolwazi ocebile iphutha uhlelo Servo, Thina ekuqinisekisa ukwesekwa eqinile ubuchwepheshe ukuze enze imikhiqizo efanelekayo umshini yekhasimende ngesikhathi.
Sisabalalisa amahora angu-24 emva-sales service ukuxazulula inkinga ngesikhathi. unjiniyela wethu uyosinika ukuqeqeshwa ukuxhumana ubuchwepheshe bamuva.